အုန်းဆီက ဆံကေသာကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ အုန်းဆီလိမ်းရမှာ ကြောက်တုန်းပဲလား? - For her Myanmar
အုန်းဆီက ဆံကေသာအတွက် ဘာတွေ အဓိက ကောင်းလဲဆိုတော့…
ယောင်းတို့ရေ … ငယ်ငယ်ကဆို အဘွားတို့ အမေတို့က အိပ်ရာနိုးလာတာနဲ့ ဆံပင်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်အုန်းဆီထည့်တာမြင်တော့ ဘာလို့များအုန်းဆီထည့်တာလဲလို့ အတွေးဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အသက်ကလေးရလာမှ အုန်းဆီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို သိလာရတော့တာပဲ။ အုန်းဆီက ဆံပင်အတွက် ဘာတွေအကျိုးပြုလဲဆိုတော့ …
အုန်းဆီက ဆံပင်ကို အရင်းကနေ အဖျားအထိအားဖြည့်ပေးတဲ့အပြင် ဆံပင်ထွက်နှုန်းမြန်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် ဆံပင်ကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ မဟာရန်သူတော်ကြီးကတော့ဂဗောက်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုမိုးရာသီမှာပေါ့။ အုန်းဆီက ဦးရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ အားဖြည့်ပေးတာကြောင့် ဦးရေပြားခြောက်သွေ့လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဗောက်အန္တရာယ်ကလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၃) ဆံသားခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်
ဆံပင်ကို မကြာခဏဆိုသလို ကောက်လိုက်ဖြာင့်လိုက်ဆေးဆိုးလိုက်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေ ကြုံတွေ့ရတာကတော့ ဆံသားပျက်စီးခြောက်သွေ့တာပါ။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ဆံသားကို အုန်းဆီပုံမှန်လိမ်းပေးရင် အုန်းဆီက ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ဆံသားကို ပြုပြင်ပေးပါတယ်။
Stella က ဆံပင်ကျွတ်သန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ ကိုယ်ကဆံပင်ရှည်ကြိုက်သူဆိုတော့ ကိုယ့်ဆံပင်လေးများကျွတ်ရင် စိတ်ဆင်းတွေကိုရဲလို့။ အုန်းဆီကို ညတိုင်းပုံမှန်လိမ်းအိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သိသိသာသာကိ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာလာတာပါပဲ။
အုန်းဆီရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဆံပင်ကို ပျော့ပျောင်းစေတာပဲ။ ဆံပင်ကြမ်းတဲ့အခါ အဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာတွေ၊ ဆံပင်ညှိတာတွေဖြစ်ပြီး ဆံပင်တွေအထွေးလိုက်ပြတ်ကျတာမျိုးတွေ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း အုန်းဆီက အသာလေးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်။
အုန်းဆီရဲ့ ဆံပင်ကိုအကျိုးပြုပုံတွေကတော့ အများကြီးမှ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Stella တို့လို ခေတ်ကာလသားသမီးတွေက အုန်းဆီကို သဘောမကျကြဘူး။ ဘာလို့ဆို အနံ့ကလည်းပြင်းသလို ဆံပင်မှာအဆီထွက်သလို ရွှဲရွှဲပြောင်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေတာ မကြိုက်ကြဘူးလေ။ ပြီးရင် အုန်းဆီလိမ်းထားတိုင်း ဆံပင်ကကပ်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတော့ အလှပျက်တယ်မှတ်လား ?
ဆံသားလည်း ကောင်းစေချင်၊ အုန်းဆီလည်း မလိမ်းချင်ဖြစ်နေတုန်း ကယ်တင်ရှင်ကို သွားတွေ့တာပဲ။ ကယ်တင်ရှင်က ဘယ်သူလဲဆိုတော့ Parachute ရဲ့ Advansed Coconut Hair Oil လေးပေါ့။ သူက ၁၀၀% လတ်ဆတ်တဲ့ သဘာဝ အုန်းသီးကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အုန်းဆီဆိုတော့ အနံ့မပြင်းဘူး သင်းသင်းလေးပဲ။ ပြီးတော့ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်ကိုတောင်မှ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြုပြင်ပေးတယ်။ စေးကပ်မှုလည်း လုံးဝမရှိလို့ နေ့စဉ်ရုံးသွားကျောင်းသွားနေရသူတွေအတွက် ကွက်တိကို အဆင်ပြေတာပေါ့။ ဒါတင်မကသေးဘူးနော် … သူကဦးရေပြားကို အေးမြစေပြီး တစ်နေကုန်လည်း ဆံကေသာကို ဆံရင်းမှ အဖျားထိ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်သေးတယ်။ အုန်းသီးရဲ့အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာမို့ ဆံကေသာကိုအာနိသင်အပြည့်နဲ့ ပြုပြင်ပေးနိုင်တာ ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။
အုန်းဆီရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း Stella က ယောင်းတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပြီ။ တစ်ခြားအုန်းဆီတွေလို ဆီကြေးနံ့ နံခြင်းလည်း မရှိ ရွှဲရွှဲပြောင်ပြောင်ကြီး ဖြစ်မနေစေဘဲ ဆံရင်း ကနေ အဖျားထိ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ Parachute အုန်းဆီလေးနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ ဆံကေသာကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ အုန်းဆီလိမ်းဖို့ လက်မတွန့်ကြနဲ့တော့နော်။
အုနျးဆီက ဆံကသောအတှကျ ဘာတှေ အဓိက ကောငျးလဲဆိုတော့…
ယောငျးတို့ရေ … ငယျငယျကဆို အဘှားတို့ အမတေို့က အိပျရာနိုးလာတာနဲ့ ဆံပငျကို စိတျရှညျလကျရှညျအုနျးဆီထညျ့တာမွငျတော့ ဘာလို့မြားအုနျးဆီထညျ့တာလဲလို့ အတှေးဝငျခဲ့ဖူးတယျ။ အသကျကလေးရလာမှ အုနျးဆီရဲ့ အသုံးဝငျပုံတှကေို သိလာရတော့တာပဲ။ အုနျးဆီက ဆံပငျအတှကျ ဘာတှအေကြိုးပွုလဲဆိုတော့ …
အုနျးဆီက ဆံပငျကို အရငျးကနေ အဖြားအထိအားဖွညျ့ပေးတဲ့အပွငျ ဆံပငျထှကျနှုနျးမွနျအောငျ လှုံ့ဆျောပေးတာကွောငျ့ ဆံပငျကို နကျမှောငျသနျစှမျးစပေါတယျ။
မိနျးကလေးတှရေဲ့ မဟာရနျသူတျောကွီးကတော့ဂဗောကျပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီလိုမိုးရာသီမှာပေါ့။ အုနျးဆီက ဦးရပွေားအတှငျးပိုငျးအထိ အားဖွညျ့ပေးတာကွောငျ့ ဦးရပွေားခွောကျသှလေို့ ဖွဈလာတဲ့ ဗောကျအန်တရာယျကလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
(၃) ဆံသားခွောကျသှခွေ့ငျးကို ကာကှယျပေးတယျ
ဆံပငျကို မကွာခဏဆိုသလို ကောကျလိုကျဖွာငျ့လိုကျဆေးဆိုးလိုကျလုပျတတျတဲ့သူတှေ ကွုံတှရေ့တာကတော့ ဆံသားပကျြစီးခွောကျသှတေ့ာပါ။ ခွောကျသှနေ့တေဲ့ဆံသားကို အုနျးဆီပုံမှနျလိမျးပေးရငျ အုနျးဆီက ရဓောတျဖွညျ့ပေးပွီး အခြိနျတိုအတှငျးမှာပဲ ဆံသားကို ပွုပွငျပေးပါတယျ။
Stella က ဆံပငျကြှတျသနျတဲ့ထဲမှာပါတယျ။ ကိုယျကဆံပငျရှညျကွိုကျသူဆိုတော့ ကိုယျ့ဆံပငျလေးမြားကြှတျရငျ စိတျဆငျးတှကေိုရဲလို့။ အုနျးဆီကို ညတိုငျးပုံမှနျလိမျးအိပျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သိသိသာသာကိ ဆံပငျကြှတျသကျသာလာတာပါပဲ။
အုနျးဆီရဲ့အားသာခကျြကတော့ ဆံပငျကို ပြော့ပြောငျးစတောပဲ။ ဆံပငျကွမျးတဲ့အခါ အဖြားနှဈခှဖွဈတာတှေ၊ ဆံပငျညှိတာတှဖွေဈပွီး ဆံပငျတှအေထှေးလိုကျပွတျကတြာမြိုးတှဖွေ့ဈတတျပါတယျ။ ဒါတှကေိုလညျး အုနျးဆီက အသာလေးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျနျော။
အုနျးဆီရဲ့ ဆံပငျကိုအကြိုးပွုပုံတှကေတော့ အမြားကွီးမှ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ Stella တို့လို ခတျေကာလသားသမီးတှကေ အုနျးဆီကို သဘောမကကြွဘူး။ ဘာလို့ဆို အနံ့ကလညျးပွငျးသလို ဆံပငျမှာအဆီထှကျသလို ရှဲရှဲပွောငျပွောငျကွီးဖွဈနတော မကွိုကျကွဘူးလေ။ ပွီးရငျ အုနျးဆီလိမျးထားတိုငျး ဆံပငျကကပျကပျကွီးဖွဈနတေော့ အလှပကျြတယျမှတျလား ?
ဆံသားလညျး ကောငျးစခေငျြ၊ အုနျးဆီလညျး မလိမျးခငျြဖွဈနတေုနျး ကယျတငျရှငျကို သှားတှတေ့ာပဲ။ ကယျတငျရှငျက ဘယျသူလဲဆိုတော့ Parachute ရဲ့ Advansed Coconut Hair Oil လေးပေါ့။ သူက ၁၀၀% လတျဆတျတဲ့ သဘာဝ အုနျးသီးကထုတျလုပျထားတဲ့ အုနျးဆီဆိုတော့ အနံ့မပွငျးဘူး သငျးသငျးလေးပဲ။ ပွီးတော့ ပကျြစီးနတေဲ့ဆံပငျကိုတောငျမှ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ပွုပွငျပေးတယျ။ စေးကပျမှုလညျး လုံးဝမရှိလို့ နစေ့ဉျရုံးသှားကြောငျးသှားနရေသူတှအေတှကျ ကှကျတိကို အဆငျပွတောပေါ့။ ဒါတငျမကသေးဘူးနျော … သူကဦးရပွေားကို အေးမွစပွေီး တဈနကေုနျလညျး ဆံကသောကို ဆံရငျးမှ အဖြားထိ အကောငျးဆုံး အားဖွညျ့ပေးနိုငျသေးတယျ။ အုနျးသီးရဲ့အဆီအနှဈတှနေဲ့ ပေါငျးစပျပွုလုပျထားတာမို့ ဆံကသောကိုအာနိသငျအပွညျ့နဲ့ ပွုပွငျပေးနိုငျတာ ပွောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။
အုနျးဆီရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေိုလညျး Stella က ယောငျးတို့အတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပွီ။ တဈခွားအုနျးဆီတှလေို ဆီကွေးနံ့ နံခွငျးလညျး မရှိ ရှဲရှဲပွောငျပွောငျကွီး ဖွဈမနစေဘေဲ ဆံရငျး ကနေ အဖြားထိ အကောငျးဆုံးအားဖွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ Parachute အုနျးဆီလေးနဲ့လညျး မိတျဆကျပေးလိုကျပွီဆိုတော့ ဆံကသောကို အားဖွညျ့ပေးတဲ့ အုနျးဆီလိမျးဖို့ လကျမတှနျ့ကွနဲ့တော့နျော။
Tags: #biography #news #women_news, coconut oil, HairCare, Parachute Advansed Coconut oil, women